रेडियो पत्रकारिता पुस्तक सार्वजनिक – Martin Chautari
रेडियो पत्रकारिता पुस्तक सार्वजनिक
पोखरा, १७ माघ । रेडियो पत्रकारिताको विकास र अनुभवको आधारमा तयार पारिएको रेडियो पत्रकारिताः एफएममा समाचार र संवाद विषयक पुस्तक सोमवार पोखरामा सार्वजनिक गरियो ।
एघार वटा अध्यायमा बाडिएको सो पुस्तकमा एफएम रेडियोको विकासक्रमको वर्णन गर्दै विगत एक दशकको कानूनी तथा नीतिगत वातावरणको विश्लेषण गरिएको छ ।
उक्त पुस्तक व्रोकास्टिङ एसोसिएसनको सहयोगमा मार्टिन चौतारीले प्रकाशनमा ल्याएको हो । मार्टिन चौतारीले विगत ५ वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न विधामा खोज अनुसन्धान गर्दै आएको छ । चौतारीले नयाँ खोजको रूपमा रेडियो एफएमलाई लिएर पुस्तक तयार पारेको यो पाँचौँ हो । पुस्तकमा प्रत्युष वन्त, शेखर पराजुली, देवराज हुमागाईं, कोमल भट्ट र कृष्ण अधिकारीले सम्पादन गर्नु भएको छ ।
रेडियो कार्यक्रमसम्बन्धी हुनुपर्ने नीति नियम, समाचार प्रसारणको शैली र अन्तरसंवाद जस्ता विषयलाई उक्त पुस्तकमा समेटिएको छ । पोखराका एफएमहरुको समाचार प्रसारण गर्ने शैली, उनीहरुले प्रयोग गर्ने समाचारका स्रोतहरु, समाचारका क्षेत्रमा गरिएका लगानी आदी विषयमा पुस्तकका लेखहरु केन्द्रित छन् ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै डा. विश्वकल्याण पराजुलीले उक्त पुस्तकले रेडियो पत्रकारिताका क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोलिदिएको बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पत्रकारिताको नीतिगत पक्षमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले समाचार प्रसारण गर्दा केही सञ्चारमाध्यमले विरोध मात्र र केहीले समर्थन मात्र दिने गरेको कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
मेची—महाकाली मिडिया सोसाईटीका अध्यक्ष माधव शर्माले एफएमबाट समाचार झिकेको खण्डमा एफएमहरु केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र बन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
रेडियो अन्नपुर्णका स्टेसन म्यानेजर दीपेन्द्र श्रेष्ठले उक्त पुस्तक आफूहरुका लागि विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउने माध्यम बनेको बताउनु भयो ।
ब्रोकास्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष शिवधर मल्लको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा पुस्तक सम्पादन गर्ने शेखर पराजुली, हिमचुली एफएमका अनुराग अधिकारी लगायतले पुस्तकको महत्त्वबारे बोल्नु भएको थियो ।
स्रोतः समाधान, १९ माघ २०६२, पृ. ४
Previous रेडियो पत्रकारिता पुस्तक सार्वजनिक Next